ILima, idolobha lamakhosi (VI) lokugcina | Izindaba Zokuhamba
ILima, idolobha lamakhosi (VI) lokugcina
UCarlos Lopez | | Amadolobha, Lima, Ukuzilibazisa, Kukhuphuka, Peru
Isigaba sokugcina edolobheni lamakhosi, ngemuva kokwazi umlando waso, amasiko, amasiko, i-gastronomy, iminyuziyamu, izindawo ezithokozisayo nezindawo lapho singathenga khona, sekuyisikhathi sokuphumula futhi sikunikele ngokuphelele ekuphumuleni ukuze wazi konke (noma cishe) izici zalo muzi oyingqayizivele.
Impilo yasebusuku yedolobha inempilo kakhulu futhi izindawo eziningi zigcwele abantu bendawo nabokufika abacula, badanse futhi bajabule ngazwi linye kuze kube sebusuku kakhulu ngoba kuyisiko ukuphuma isikhathi impela futhi uma lokho kungezwa ukuthi abantu basePeru kakhulu abagabadelayo nokuthi bathanda ukulungiselela okuningi futhi bezolile lapho bephuma ... buthule kungaba phakathi kwamabili futhi sebeqedile ukulungiselela.
Ama-disco, izindawo eziyintandokazi kubantu baseLima
Izindawo ezimbalwa kuphela ezidinga ikhodi yokugqoka futhi kufanele ube seminyakeni yobudala esemthethweni ukungena kumakilabhu, futhi uphuze notshwala. Amahora okuvala aguquguquka kakhulu ngoba izitolo eziningi azivali kuze kufike ikhasimende lokugcina.
Lapho abantu abaningi bebuthana khona endaweni yaseMiraflores, eSan Isidro nasendaweni yaseBarranco. EMiraflores izindawo ezihamba phambili yizo ezinikela ngomculo obukhoma eKennedy Park nasemagcekeni enxanxathela yezitolo ULarco Mar. Endaweni yaseSan Isidro, umkhathi ungaphezulu kancane kubantu abaneminyaka engama-40 nangaphezulu, kepha lowo othatha ikhekhe yiBarranco, lapho iqembu labo liqala khona ngoLwesine lihlale kuze kube yiSonto ebusuku.
ILarco Mar Shopping Centre
Uma uthanda ukugembula eLima, uzoba nezindawo eziningi zokukwenza. Okuboniswe kakhulu yi Amakhasino La Hacienda etholakala ehhotela enegama elifanayo. Ikhodi yokugqoka ivame ukuhleleka, yize i-etiquette ingadingeki. Njengokuphuza utshwala nokungena kuma-disco athile, ubuncane beminyaka yokungena kulolu hlobo lwendawo uneminyaka eyi-18.
Ihhotela neCasino La Hacienda
Ngokuqondene nezindawo zokuzijabulisa zasebusuku, okuvame kakhulu ukuba khona IKitsch y Ubusuku, zombili endaweni yaseBarranco. Ubusuku futhi bunezitezi ezimbili nesiteji lapho kubanjelwa khona amakhonsathi abukhoma. EMiraflores kukhona Ukoma okungcwele lapho kuhlanganiswa khona izitayela ze-pop ne-salsa futhi kunokutheleka okuncane.
Futhi uma okufunayo ukulalela umculo obukhoma, indawo yakho ikhona I-Jazz eyodwa, eMiraflores, lapho ngoMsombuluko nangoMgqibelo ungathokozela amabhendi adlala kusuka ku-blues kuya ku-jazz ye-avant-garde kakhulu.
Ukuze wazi ngempilo yasebusuku nokuzilibazisa edolobheni ungavakashela iwebhusayithi yaleli phephandaba El Comercio
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » Amadolobha » Lima » ILima, idolobha lamakhosi (VI) lokugcina
Sawubona okuhle bengifuna ukukubingelela ngithi ngiyathanda kakhulu i-larcomar xk ithule kakhulu futhi futhi i-xk kukhona konke futhi ingcono kunolwandle oluhle ongalibuka ukuze uzwe amagagasi alo nokuzwa komoya.
Isithombe se-Leticia De las Casas kusho
Engikuthandile kakhulu ngeLima inani lezindawo zokuheha elinazo, bengicabanga ukuthi leli bekuyidolobha elidlulayo ukufika eCuzco, kepha benginephutha kakhulu. ITurperu, inkampani yezokuvakasha engayiqasha, yangihlelela ukuvakasha ukuze ngazi idolobha nezindawo zalo zomlando nezokuzijabulisa. Isikhathi sami besisifushane, kepha engikuthande kakhulu kube yiMagic Water Circuit, ngihambile ebusuku futhi ngumbukiso omuhle kangakanani osinikezayo, lena yiLima ehamba phambili ngaphandle kokungabaza. Iqiniso belingeke lilazi ngale ndlela leli dolobha ukube bekungeyona le nkampani yezokuvakasha, kuyanconywa uma ulinga ukuvakashela eLima.
Phendula uLeticia De las Casas
Izindawo eziyi-10 okungafanele uziphuthe eHavana, eCuba